Waxyaabaha suuq geynta emaylka, adeegyada iyo wararka iyo sidoo kale talooyinka naqshadeynta emaylka iyo hababka ugu fiican ee suuqleyda Martech Zone
Khamiis, Juun 29, 2021 Khamiis, Juun 29, 2021 Douglas Karr
Sabtida, Juun 17, 2021 Sabtida, Juun 17, 2021 Jim Berryhill
Xidhitaanka iibku waa daqiiqad weyn. Waa goorta aad u dabaaldegi karto dhammaan shaqooyinka galay helitaanka macaamiil cusub. Waa halka dadaalka dadkaaga oo dhan iyo qalabkaaga CRM iyo MarTech la geeyay. Waa pop-the-champagne waxayna neefsataa daqiiqad gargaar ah. Sidoo kale waa bilow. Kooxaha suuqgeynta fekerka hore waxay qaadanayaan hanaan socda oo lagu maareeyo safarka macaamiisha. Laakiin gacan-siinta udhaxeysa aaladaha dhaqameed way bixi karaan
Ololaha firfircoon: Maxay Taageyntu muhiim ugu tahay Blog-kaaga markay timaado RSS Is-dhexgalka Emailka
Jimco, Juun 25, 2021 Jimco, Juun 25, 2021 Douglas Karr
Hal muuqaal oo aan u maleynayo in aan sifiican looga adeegsan warshadaha emaylka ayaa ah adeegsiga RSS quudinta si loo soo saaro waxyaabaha ku habboon ololahaaga emailka. Meelaha badankood waxay leeyihiin muuqaal RSS ah halkaasoo ay fududahay in lagu daro quudinta joornaalka emaylkaaga ama olole kasta oo kale oo aad diraysid. Waxa laga yaabo inaadan ogaan karin, in kastoo, ay tahay inay fududahay in si gaar ah loo dhigo, waxyaabaha la calaamadeeyay, emaylladaada halkii laga isticmaali lahaa dhammaan baloogyadaada
Ku darida Horudhaca Emailka wuxuu Kordhiyay Qiimeynta Meelaynta Sanduuqa My 15%
Monday, June 14, 2021 Arbacada, Juun 16, 2021 Douglas Karr
Email dirida waa doqon. Ma kaftamayo. Waxay jirtay in ka badan 20 sano laakiin wali waxaan haynaa 50 + macaamiil emayl oo dhamaantood si isku mid ah u muujiya isla koodhka Annaguna tobanaan kun oo Bixiyeyaasha Adeegga Internetka ah (ISPs) oo dhammaantood asal ahaan leh xeerar u gaar ah oo ku saabsan maareynta SPAM. Waxaan haynaa ESPs oo leh sharciyo adag oo ganacsiyada ay tahay inay waafaqaan marka lagu darayo hal macmiil… sharciyadaasna waligood si dhab ah looma gaadhsiiyo